[1 Bed] Creek Edge [Plana Fanodinana 6040] - Creek Edge - Provident Estate
1 trano fatorana trano ao Creek Edge, Dubai Creek Harbor, Dubai
Location:Creek Edge, Dubai Cre ...
Vision - Safe sy tsy miankina, napetraka ao am-pon'ny natiora - miaraka amin'ny fomba fijery mamy indrindra - ity dia CREEK EDGE. Ny tilikambo roa miavaka amin'ny 40 sy 20 dia miankina amin'ny alan-drano akaikin'ny Nosy Creek, mifamatotra amin'ny kianja fialan-tsasatra tsara tarehy.
Prime Location - Ny Nosy Creek dia miorina avaratry ny Downtown Dubai manakaiky ny araben'i Dubai. Ilay nosy dia manandratra ny iray amin'ireo sehatra mahatalanjona indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny sary mihetsika misy ny lanitra afovoan-tanànan'i Dubaiu2019 ho an'ny ultramodern - anisan'izany Burj Khalifa mahagaga.
- Ny tranobe 40 sy 20 marevaka dia mipoitra eo ambonin'ny moron-dranomasin'ny Nosy Creek, mifandray amin'ny alàlan'ny kianja fialan-tsasatra tsara tarehy.
Ny Nosy Kreta dia manana rafitra fitaterana feno tanteraka mba ahafahanao mivezivezy malalaka an'i Dubai.
-Voya ny varavarankely misy lavarangana ho an'ny tafo ary ny lakozia mahavariana.
- Natao tamin'ny lakana famaranana tsy manam-paharoa, kianja-tsarimihetsika miaraka amin'ny cabanas, faritra Zen & Yoga.
Safidy maro misy: 1, 2 ary 3 Bedroom Apartments.
[1 Bed] Creek Edge [Planeta Fanolorana 6040] | PRD-S-6032